Vaovao - Maninona no mifidy antsika
Fampanantenan'ny fanompoana ：
Mampanantena izahay fa ny tahan'ny vokatra azo ekena dia 100%, ary ny vanim-potoana fiantohana dia 3 taona. Manaraka ny fifanarahana ary manatanteraka am-pahatsorana ireo fe-potoana nifanarahana: fandefasana ara-potoana, fampandrenesana ara-potoana ny fandefasana ny entana any amin'ny ankilany; Ampioreno mafy ny fahatsiarovan-tena amin'ny serivisy, mijoro hatrany amin'ny haavon'ny fangatahan'ny mpampiasa, manangana fifampidinihana amin'ny serivisy amin'ny toetrandro; ny mpiasan'ny orinasanay amin'ny fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny maha-fenitra azy, ny mpanjifa dia marina foana, ny serivisy dia tsara kokoa, tsy misy tsara indrindra, serivisy Tsy afaka mihemotra; manao asa tsara amin'ny famerenana mitsidika ny mpanjifa ara-potoana, mangataka ny hevitry ny mpanjifa, manatsara ny mombamomba ny vokatra, ary mamaly am-pahavitrihana sy manolotra vahaolana amin'ireo olana samihafa apetraky ny mpanjifa, mba hanitsiana ireo olana ara-potoana mandra-pahavoky ny mpanjifa.
Fanandramana mandeha ho azy:
Ny fitsapana fatory rehetra dia mandeha ho azy avokoa izay tsy manatsara ny fahombiazan'ny asa fotsiny fa manome antoka ny mpiasa.
Ny ankamaroan'ny orinasa malaza toy ny plate grid
Hevitry ny orinasa:
Mitadiava tsena miorina amin'ny kalitao, katsaho ny fivoarana amin'ny fahitsiana; raiso ny teknolojia vaovao sy avo lenta, manangana fiaraha-miombon'antoka amin'ny orinasa, mamorona lohateny voalohany; manatanteraka ny paikadin'ny harena an-tapitrisany maro, mba hisongadinana sy ho lohalaharana. Raha jerena ny toe-javatra eny an-tsena, ny orinasa, mahazo fahatokisana ireo vondrona mpiasa be fandavan-tena amin'ny fikafika, faharanitan-tsaina ary fahombiazana, dia mampivelatra serivisy avo lenta sy avo lenta ary orinasa avo lenta.
Miorina amin'ny kalitao tena tsara, fahaizana amam-bika & fanamboarana za-draharaha, tombony amin'ny fifaninanana, nivarotra entana tany Azia, Eropa, Amerika, Moyen Orient sy Afrika, ect, firenena sy faritra 60 mahery.
Raha liana amin'ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay haingana indrindra !!!
Kaody kaody: 050200